2 December- Maalinta Caalamiga ee Cirib-tirka Addoonsiga | Radio Himilo
Home / Maalmaha Caalamiga / 2 December- Maalinta Caalamiga ee Cirib-tirka Addoonsiga
2 December- Maalinta Caalamiga ee Cirib-tirka Addoonsiga
Waxaynu nool nahay qarniga 21aad oo mid iyo qof kasta uu xor u yahay inuu sameeyo wuxuu ka helo; u dhaqmo suu doono; u noolaado suu doorbidayo.
Waxaynu ka hadalnaa xurnimo hayeeshe dhab ahaan, dhamaan dadku ma wada ahan xor. Adoonsigii waa la xabisay; wuxuuna ka noqday xaq-daro aduunka oo dhan, hase ahaatee, dadku wali waxay adoon u yihiin waxyaalo badan ogaal iyo ogaal la’aan.
Mid adoonsiga ku jirta oo ah meel qofku uusan helin xurnimo ayaa dunida ku baahsan ilaa maanta. Tani ma ahan mid kale ee waa ka ganacsiga dadeed “Human Trafficking” oo dunida ka ah wax iska caadi ah.
Ka ganacsiga dadka waxaa lagu qeexi karaa dhaqaale ka sameynta Bani’aadanka, ugu badnaan ujjeeddo la xiriirta adoonsi galmood “Sexual slavery,” san-dulleyn shaqo “forced labour,” ama in lagala baxo xubnaha muhiimka u ah jirka qofka sida; beerka, minka, kilyaha i.w.m.
Dad-ka-ganacsiga waxaa loo sameeyaa inay tahay meel si fudud looga sameyn karo lacago badan waqti yar gudihiis. Waa shaqo halis daran. Hayeeshe, dadka-gacanacsadayaasha waxay dhiseen xiriir adag oo dunida isugu furan taas oo ay ku adag tahay bilayska aduunka inay si fudud ula jaan-qaadaan wax-ka-ogaanshaha xiriiradooda. In dadka laga ganacsado waa fal Aadminimada ku xun. Waxay si fool xun uga hor imaanaysaa xaqa qofka Bani’aadanka ahi leeyahay.
Addoonsigu meelna kama ahan sharci, haddana meel walba ayuu ka jiraa. Addoonsiga ugu badan waxaa laga heli karaa dalalka Hindiya iyo qaaradda Afrika.
Si kastaba, 02 bisha Dec sanad kasta waxaa dunida laga xusaa Maalinta Caalamiga ee Cirib-tirka ama laalista Addoonsiga si xal loogu helo mushkiladdan insaaniga ah. Maanta oo kale waxaa dunida loogu yeeraa inay cod midaysan iyo wax-qabad muuqda kala hortagaan addoonsiga nuucyadiisa kala duwan. Taariikh ahaan, waxaa dib loogu celiyaa Maalintan 2 Dec sanadkii 1949-kii.
Diiradda Maalintan waa in la cirib-tiraa nuuc walba oo kamid ah addoonsiga sida dad-ka-ganacsiga, dhaca xagga galmada, ku shaqeysiga carruurta, guurka-qasabka ah iyo in carruurta loo adeegsado askaraynta iyo goobaha dagaallada.
Previous: Maxay dadka qaar u dhibsadaan habsiinta?! Jawaab cilmiyeysan
Next: Mauro Icardi oo farriin siiyay kooxaha daneynaya